महिनावारीको वेला यौन सम्पर्क गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु जान्नुहोस् ! « NagarikTimes
२४ पुष २०७५, मंगलवार १३:१७
एजेन्सी : महिनावारी एक सामान्य प्रक्रिया हो । महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क गर्ने चाहान हुनु पनि स्वभाविक हो तर धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । वैज्ञानिकहरुले भने यसका बारेमा फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
महिनावारी सुरु हुँदा, प्रोजेस्ट्रोन भन्ने होर्मोनेले गर्दा पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन सुरु गराउँछ जसले गर्दा पाठेघरबाट रगतसहित अरु पदार्थहरू महिनावारीको रूपमा बाहिर निस्कछ । महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्दा, चरमसुखको बेला पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन हुन्छ, जसले गर्दा, सम्भोगपछि अरु पदार्थसहित रगत अलि बढी बग्नसक्छ । र महिनावारीको समयावधिलाई पनि कम गर्छ । तसर्थ महिनावारी हुदा सुरक्षित तरिकाले यौन सम्पर्क गर्दा कुनै हानी नहुने चिकित्सकको राय रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ पुष २०७५, मंगलवार १३:१७
दिसा-बिसाव गर्नु आवश्यक्ता झै मानव जीवनमा यौन सम्बन्ध पनि उत्तिकै आवश्यक मानवको दैनिक जीवनमा अन्य
जीवन-शैली : स्तन मिच्दै सेक्स गर्नु लाभदायक तर स्तन चुस्नु भने हानिकारक
यौन पार्टनरको स्तन मिचेर आनन्द उठाउने पुरुषहरुको निम्ति खुशीको खबर छ । युसी बर्कली र
श्रीमान-श्रीमतीबीच यौन आनन्द लिन अपनाउनुहोस् यस्ता आशन
श्रीमान-श्रीमतीबीच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला ? पुरुष यौन साथीलाई रमाइलो
यसरी पाउँछन् महिलाले बढी सेक्स आनन्द, पारिवारिक आनन्दका लागि पनि थाह पाइराख्नुस् यी उपायहरु
महिलाहरू पुरुषको तुलनामा ज्यादा लजालु हुने भएकाले आफ्नो पार्टनरलाई खुसी राख्नको लागि नै उनीहरू सेक्स
यौन सम्बन्धपछि युवतीमा देखिन्छ यस्ता परिवर्तनहरु, तर हुनुपर्छ इमोशन्सका साथ जोडीका बीच सम्बन्ध
यौनले कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । इमोशन्सका साथ जोडीका बीचको सम्बन्धलाई पनि यसले
महिलालाई यौन सम्पर्कको लागि सजिलै उत्तेजित बनाउने यी हुन् ११ उपायहरु
अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी